SVT oo lagu eedeeyey cunsuriyad sida ay uga warameen dhacdadii Trollhättan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay onsdag 28 oktober 2015 kl 15.14
Dhowr urur ayaa warqad furan u qoray madaxa sare ee SVT Hanna Stjärne, waxayna ku eedeeyeen telefishan sida uu uga waramay weerarkii khamiistii hor ka dhacay iskuul ku yaala degmada Trolhättan, taas ay ku tilmaameen in qaab cunsuriyad ah uga warameen dhacdada.
- Naxdin iyo murugo aby Trollhättan kaddib weerar muddi oo ka dhacay iskuulka Kronan.
Sida tan ayaa barnaamijka wararka ee SVT-Rapport ku bilaabay markuu hawada soo galay galabkii khamiista saacado ka dib weerarkii argagaxiso ee loogu geystay iskuulka kuna nafwaayeen ardey, macallin iyo ninkii weeraraka argagaxisada ah soo qaaday.
Balse markii uu barnaamijka dhaxbartanka marayo ayaa weriyad ku sugnayd Trollhättan oo wareysanaysay afhayeenka degmada Peter Asp weydiisay su’aal ururo badan ka caraysiisay.
Sida tan ayaa wax u dhaceen:
(weriyaha studiyaha )
- imminkana aan dib kuugu soo noqo Ann Wollner, waxaa kula jooga afhayeenka degamda finns du där Trollhättans Peter Asp.
- Haa, iskuulka waa mid aad u qoqoban oo ayna yaryahiin arddeyda iswiidhishka ah ee dhigata. Maxaa ka leedahay middas?
Su'aalshas weriyaha telefishinka ayaa ka caraysiisay urur badan taas oo keentay in ay warqad canaan iyo dhaleeceyn ah u qoraan madaxa telefishinka.
Kitimbwa Sabuni waa isku duwaha ururka Afrosvenskarnas riksförbund, waxuuna ka mid yahay dadka warqad u qoray madaxa telefishinka SVT Hanna Stjärne. Waxuuna sheegay taageero ballaaran u heysto warqadooda dhaleeceyn ee ka dhanka ah SVT iyo qaabka cunsuriyadeed ee ay uga warameen dhacdadii Trollhättan. Ayna ka sugayaan jawaab telefishinka in uu ka baxiyo eedeymaha ay u hayaan.
- Annaga iyo dhamaan sidaan hubo dad kale oo badan waxaan ka xumaanay oo ka naxnay sida SVT ahmiyadda u saaray caruurta iskuulkan dhigta, oo weriyahooda sida uu yeri aan Iswdhish aheyn.
Anne Lagercrantz waa madaxa wararka iyo ciyaaraha teleshinka SVT, waxayna sheegta in sida ay dhacdadan wax ka baranaya ayna Kitimbwa Sabuni iyo kuwa kale ee warqad la qoray la kulmi doonaan.
- Waxaan rabaa in aan raaciyo qalad ayey naga noqtay. Waana la qabnaa sida dadka kale sidas in u hadalno qalad in ay tahay. Waa arrin qalad ku dhacday oo laga xumaado, waana qeexid abuuraysa kalo qaybsanaan ah annaga iyo ayaga, ayey tiri.